Joshua 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Zvino Joshua mwanakomana waNuni akatuma varume vaviri pachivande vachibva kuShitimu+ vari vasori, achiti: “Endai, muone nyika yacho uye Jeriko.” Naizvozvo vakaenda vakasvika paimba yomukadzi aiva pfambi ainzi Rakabhi,+ vakagara ipapo. 2 Kwapera nguva yakati mambo weJeriko akaudzwa kuti: “Tarirai! Varume vanobva kuvanakomana vaIsraeri vapinda muno usiku huno kuzoongorora nyika.” 3 Mambo weJeriko akatumira shoko kuna Rakabhi, achiti: “Budisa varume vauya kwauri, vapinda mumba mako, nokuti vauya kuzoongorora nyika yose.”+ 4 Munguva iyi mukadzi wacho akatora varume vaya vaviri, akavavanza, akati: “Chokwadi, varume vacho vauya kwandiri, asi handina kuziva kwavanga vachibva. 5 Varume vacho vabuda kwasviba, gedhi+ rava kuvharwa. Handimbozivi kuti varume vacho vaenda kupi. Kurumidzai kuvatevera nokuti muchavabata.” 6 (Asi iye akanga avakwidza padenga,+ akavachengeta vasingaoneki pakati pemashanga omufurakisi aakanga akaronga padenga.) 7 Varume vacho vakavatevera vakananga kuJodhani kumazambuko,+ vakavhara gedhi pashure pokunge vaivatevera vabuda. 8 Zvino ivo vasati varara, akakwira kwavaiva padenga. 9 Akati: “Ndinoziva kuti Jehovha achakupai nyika,+ uye kuti tiri kukutyai,+ uye kuti vagari vose vomunyika vaora mwoyo nokuda kwenyu.+ 10 Nokuti takanzwa kuomesa kwakaita Jehovha mvura yeGungwa Dzvuku pamberi penyu pamakabuda muIjipiti,+ nezvamakaitira madzimambo maviri evaAmori aiva mhiri kwaJodhani, kureva Sihoni+ naOgi,+ amakaparadza+ chose. 11 Patakazvinzwa, mwoyo yedu yakatanga kutya,+ uye hapana munhu achine ushingi nokuda kwenyu,+ nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari kumatenga ari kumusoro nepanyika iri pasi.+ 12 Ndapota, zvino ndipikirei naJehovha+ kuti, zvandakuitirai mutsa worudo, imiwo muchaitira imba yababa vangu+ mutsa worudo, mundipe chiratidzo+ chakavimbika. 13 Muchengetedze baba vangu+ naamai vangu nehanzvadzi dzangu nevanasikana vaamai vangu navose vari vavo vari vapenyu, mununure mweya yedu irege kufa.”+ 14 Varume vacho vakati kwaari: “Mweya yedu inofanira kufa panzvimbo penyu!+ Kana mukasataura nezvedu, Jehovha paanotipa nyika yacho, isuwo tichakuitira mutsa worudo uye tichava vakavimbika kwauri.”+ 15 Pashure paizvozvo akaita kuti vaburuke netambo nepahwindo, nokuti imba yake yaiva parusvingo, uye iye aigarawo pamusoro porusvingo.+ 16 Akati kwavari: “Endai kunzvimbo ine makomo, kuti vaya vari kukuteverai vasasangana nemi; murambe makavanda ikoko kwemazuva matatu, kusvikira vaya vari kukuteverai vadzoka, pashure pacho mungaenda kwamanga muchienda.” 17 Varume vacho vakatiwo kwaari: “Hatina mhosva pamusoro pemhiko yako yawaita kuti tipike.+ 18 Tarira! Tichapinda munyika. Usungirire tambo iyi yeshinda tsvuku pahwindo rawatiburutsa naro, uunganidze mumba mauri, baba vako naamai vako nehanzvadzi dzako neimba yose yababa vako.+ 19 Ani naani anobuda kunze kwemasuo eimba yako achienda panze,+ ropa rake richava pamusoro wake, uye hatizovi nemhosva; uye munhu wose anoramba ainewe mumba, ropa rake richava pamisoro yedu kana akakuvadzwa. 20 Asi kana ukataura nezvedu,+ isu hatizovi nemhosva pamusoro pemhiko yako yawaita kuti tipike.” 21 Iye akati: “Ngazviitike sezvamataura.” Naizvozvo akavarega vachienda, ivo vakaenda. Akazosungirira tambo tsvuku pahwindo. 22 Nokudaro vakaenda vakasvika kunzvimbo ine makomo, vakaramba vachigara ikoko kwemazuva matatu, kusvikira vaivatevera vadzoka. Zvino vaivatevera vakanga vachivatsvaka mumigwagwa yose, asi havana kuvawana. 23 Varume vaya vaviri vakaburukazve vachibva munzvimbo ine makomo, vakayambuka, vakasvika kwaiva naJoshua mwanakomana waNuni, vakatanga kurondedzera kwaari zvinhu zvose zvakanga zvaitika kwavari. 24 Ivo vakati kuna Joshua: “Jehovha aisa nyika yose muruoko rwedu.+ Naizvozvo vagari vose vomunyika yacho vaorawo mwoyo nokuda kwedu.”+